Ixabiso eliphantsi leSBB Amatikiti oLoliwe kunye namaxabiso eeNdlela zokuHamba | Gcina A Isitimela
Ixabiso eliphantsi leSBB Amatikiti oLoliwe kunye namaxabiso eeNdlela zokuHamba
ekhaya > Ixabiso eliphantsi leSBB Amatikiti oLoliwe kunye namaxabiso eeNdlela zokuHamba
Apha unokufumana lonke ulwazi malunga Amatikiti etreyini amaxabiso aphantsi yaye Amaxabiso okuhamba kwe-SBB kunye nezibonelelo.
izihloko: 1. I-SBB ngeeNgcaciso zoQeqesho
2. Malunga ne-SBB 3. Ukuqonda okuphezulu Ukufumana iTikiti elinexabiso eliphantsi leSBB
4. Axabisa malini amatikiti eSBB 5. Iindlela zokuhamba: Kutheni kungcono ukuthatha oololiwe be-SBB, kwaye ungahambi ngenqwelomoya
6. Yintoni umahluko phakathi komgangatho, Ukupasa kosuku, kunye ne-Supersaver kwi-SBB 7. Ngaba kukho umrhumo weSBB
8. Kuthatha ixesha elingakanani ngaphambi kokumka kwe-SBB 9. Zithini iishedyuli zoololiwe ze-SBB
10. Zeziphi izikhululo zikaloliwe ezinikezelwa yi-SBB 11. I-SBB FAQ
I-SBB ngeeNgcaciso zoQeqesho
the I-Swiss Federal Railways, SBB, yinkampani kaloliwe kazwelonke esebenza eSwitzerland.
Oololiwe be-SBB babekwa phezulu kwiinkqubo zikazwelonke zikaloliwe eYurophu, kunye 2017 ibekwe kuqala kumgangatho wenkonzo, Inqanaba lokhuseleko, kunye nesalathiso sokusebenza.
25 abakhweli abazizigidi bahamba nge-SBB yonke imihla.
Inkonzo yoololiwe ye-SBB yenye yeenkonzo zoololiwe ezifika ngexesha ehlabathini, ngaphantsi kwe- 3 Ukulibaziseka kwemizuzu kwi-avareji.
Itonela leSBB elide kakhulu, itonela leGotthard Base, kwi IiAlps zaseSwitzerland, amanyathelo 57.1 iikhilomitha kwaye ubeka irekhodi lehlabathi.
I-SBB inayo 3 iilwimi ezisemthethweni: IsiJamani, IsiFrentshi, kunye nesiTaliyane. ngoko ke, Izikhululo zikaloliwe ze-SBB zithiyiwe kwaye ziphawulwe ngokungqinelana nendawo: amagama ezitishi kunye neempawu kwizixeko ezibini iilwimi zombini ziilwimi zasekuhlaleni, kwaye kutheni ungalibona igama ngamanye amaxesha linje I-SBB CFF FFS.
I-SBB yinkonzo yoololiwe yaseSwitzerland yenye yezona zibalaseleyo kwihlabathi.
Inkampani kaloliwe yaseSwitzerland yeSBB isebenza kulo lonke elaseSwitzerland, nge 798 kwizikhululo zikaloliwe, yaye 721 amatikiti etreyini amanqaku okuthengisa. Inkampani kaloliwe i-SBB yeyaseburhulumenteni ukusukela nge-1 kaJanuwari, 1999, Ithetha ukuba urhulumente wobumbano ubambe 100% lezabelo.
Yiya e Gcina iKhaya leLoliwe okanye usebenzise lewijethi ukukhangela Uqeqesha amatikiti eSBB
Ukuqonda okuphezulu Ukufumana iTikiti elinexabiso eliphantsi leSBB
inombolo 1: Fumana amatikiti akho e-SBB kwangaphambili kangangoko unakho
Iitikiti zikaloliwe zeSBB ziyafumaneka kwi-intanethi ukuya kuthi ga 60 kwiintsuku phambi komhla wokuhamba. Xa u-odola amatikiti etreyini ngaphambi kwexesha, ufumana awona matikiti abiza kancinane kwaye awona maxabiso aphantsi eSBB oololiwe ancitshiswe kakhulu. Ngaphezu, Amaxabiso etikiti likaloliwe i-SBB anyuka njengoko usuku lwakho lokuhamba lusondela, ukuze yonga imali kwi-SBB yakho yokuthenga itikiti, ukufumana amatikiti etreyini yakho kwangaphambili. Ukugcina imali kwiitikiti zikaloliwe ze-SBB, Thenga amatikiti akho kwangoko.
inombolo 2: Ukuhamba nge-SBB ngexesha lokuhamba
Amatikiti oololiwe eSBB zitshiphu kumaxesha okuphuma ngaphandle, ekuqaleni kweveki, nasemini. Unokuqiniseka ukuba uyifumana amatikiti etreyini ingabizi phakathi evekini. Ngolwesibini, uLwesithathu, nangoLwesine, Iitikiti zikaloliwe zeSBB zezona zoqoqosho. Ngenxa yevolumu ye zabahamba Ukuya emsebenzini kusasa nangokuhlwa, amatikiti kaloliwe axabisa ngaphezulu. Ngaloo ndlela, kuxabisa kakhulu ukuhamba nanini na phakathi kwemini nangokuhlwa. Ngeempelaveki lelinye ixesha eliphakamileyo loololiwe, ngakumbi ngolwesiHlanu nangoMgqibelo. Amaxabiso etikiti likaloliwe le-SBB nawo ayenyuka kwi iiholide zikawonke-wonke kunye neeholide zesikolo.
inombolo 3: Odola amatikiti akho eSBB xa uqinisekile ngeshedyuli yakho yohambo
Oololiwe beSBB Bafunwa kakhulu, kwaye kuphela 2 ezinye iinkampani zikaloliwe njengokhuphiswano, Okwangoku zihlala zikhetho lukaloliwe oluphezulu eSwitzerland. Banako ukuhlawula isithintelo setikiti njengale banayo ethintela ukutshintshiselana ngamatikiti okanye ukubuyiselwa kwemali ngaphandle kokuba kuluhlobo lweTikiti lokuthengisa. Nangona kusekho iwebhusayithi apho unokuthengisa khona amatikiti akho asebenzisana nabantu, I-SBB ayikuvumeli ukuthengiswa kwetikiti lesibini. Kukunceda njani oku ukugcina imali? Yenza i-tiketi yakho kuphela xa uqinisekile ngeshedyuli yakho ingakusindisa ekubhukeni itikiti elinye kabini kuba into ethile iza kwaye awungekhe usebenzise itikiti lasekuqaleni.
inombolo 4: Thenga itikiti lakho le-SBB kuGcina uLoliwe
Gcina uloliwe ngowona mkhulu, egqibelele, kunye nezona ndleko zixabiso eliphantsi kwitikiti laseYurophu. Unxibelelwano lwethu nabaqhubi abaninzi boololiwe, imithombo yamatikiti kaloliwe, kunye nolwazi lwethu lwetekhnoloji ye-algorithms isinika ukufikelela kwiitikiti zexabiso eliphantsi zetikiti. Asinikezeli nje ngexabiso eliphantsi lokuthenga amatikiti e-SBB kuphela; sibonelela ngokufanayo kwezinye iindlela ezizezinye kwi-SBB.
ILyon ukuya kumaBasel amaXabiso oLoliwe
I-Zurich ukuya kumaxabiso eBasel oQeqesho
Amaxabiso eParis ukuya eBasel
ILucerne ukuya kumaBasel amaXabiso oLoliwe
Axabisa malini amatikiti eSBB?
Amatikiti e-SBB aqala ukusuka kwi- € 12.50 ukuya kuthi ga kwi-125 euros kuhambo olunye lukaloliwe. the Ixabiso letikiti likaloliwe le-SBB kuxhomekeke kuhlobo luni lwetikiti, indawo ekuyiwa kuyo, naxa ukhetha ukuhamba:
Imigangatho € 12.50 – € 35 € 28 – € 55
Iklasi yokuqala I-50 Euro – € 95 I-50 Euro – € 125
Iindlela zokuhamba: Kutheni kungcono ukuthatha oololiwe be-SBB, kwaye ungahambi ngenqwelomoya
1) Ufika kwi IZiko lesiXeko. Le yenye yeendlela eziloliwe zeSBB xa kuthelekiswa neenqwelo moya. Oololiwe be-SBB kunye nako konke olunye uhambo ngololiwe ukusuka naphi na esixekweni kuye kumbindi wedolophu elandelayo, ayinamsebenzi ukuba yi Ugcino lwendalo okanye kwilali. Iyakongela ixesha kunye neendleko zekhithi ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya ukuya kumbindi wesixeko. Ngokuma kwezitimela, Kulula ukuba ufike naphi na kwisixeko oya kuso. Ayinamsebenzi ukuba usuka phi, eGeneva, Basel, Zermatt, okanye iZurich, Ukuma kwiziko lesixeko kuluncedo olukhulu koololiwe be-SBB!
2) Ukuhamba ngeenqwelo moya kufuna ukuba ube kwisikhululo seenqwelomoya ubuncinci iiyure ngaphambi kwexesha lakho lokuhamba. Kuya kufuneka uhlolwe kukhuseleko ngaphambi kokuba uvunyelwe ukukhwela inqwelomoya. Ngoololiwe be-SBB, Kufuneka ube kwisikhululo ungaphantsi kweyure ngaphambili kwaye ngamanye amaxesha ungaphantsi. Xa ujonge nexesha ekuthatha ngalo ukuya kwisikhululo seenqwelomoya ukuya kumbindi wesixeko, uyakuqonda ukuba oololiwe be-SBB bangcono ngokubhekisele kwitotali ixesha lokuhamba.
3) Kumphezulu, Ixabiso lamatikiti etreyini e-SBB libonakala libiza kakhulu kuneetikiti zomoya zohlahlo-lwabiwo mali. kunjalo, xa uthelekisa zonke iintlawulo ezichaphazelekayo, Iitikiti zikaloliwe zeSBB zinexabiso elingcono. Ngezinye iindleko ezinjengemirhumo yemithwalo ekungafuneki ukuba uyihlawule koololiwe, uhamba nge-SBB kugqibelele.
4) Oololiwe balungelelene nokusingqongileyo. Xa uthelekisa phakathi koololiwe kunye neenqwelomoya, oololiwe baya kuhlala bephuma ngaphezulu. Iinqwelomoya ziwungcolisa kakhulu umhlaba ngenqanaba eliphezulu lekhabhoni kunye neco2 abayinikayo. Oololiwe ekusebenziseni ngokuthelekisa kakhulu ngaphantsi kweCarbon footprint kuneenqwelomoya.
Chur ukuya kumaThusis amaXabiso oLoliwe
I-Zurich iya kwiChur yamaXabiso oLoliwe
IGeneva ukuya kumaxabiso oLoliwe kaChur
Yintoni umahluko phakathi komgangatho, Ukupasa kosuku, Ukupasa uSuku loSuku, kunye ne-Supersaver kwi-SBB?
I-SBB ineentlobo ezahlukeneyo zamatikiti kuhlahlo-lwabiwo mali olwahlukeneyo kunye neendidi zabahambi: ingaba lishishini okanye lolonwabo. Unokuqiniseka ukuba elinye lala matikiti liya kukulingana.
Amatikiti eSBB aqhelekileyo:
the Itikiti eliqhelekileyo leSBB lolona lubhetyebhetye kuzo zonke itikiti le-SBB. Le tikiti yololiwe yenzelwe inqaku 1 indlela okanye uhambo olujikelezayo. Ngamanye amazwi, itikiti eliqhelekileyo le-SBB likhadi lokuhamba eliqhelekileyo. okubaluleke kakhulu, itikiti likaloliwe lisemthethweni yonke imini oyikhethileyo ngexesha lokuthenga, kude kube 5 Ndilandelayo. Ukwengeza, ungathenga itikiti lokufaka amanqaku kwi-SBB kwiklasi ye-1 neye-2. Olunye uncedo olukhulu lwelo tikiti lokuya kwinqanaba-lokuba abantwana kude kube badala 6 hamba simahla. Ngamanye amazwi, ungahamba naphi na apho unqwenela khona nakweliphi na iklasi, kuhambo lwakho ukusuka ku-A ukuya ku-B.
I-SBB Day Pass kunye ne-Saver Day Pass Amatikiti:
Ngekhadi lokuhamba leSaver Day Pass, ungahlawula imali encinci njenge- $ 27 ngohambo. Itikiti lePasi yoSuku lifumaneka kuphela ukuba ubafumana kwangaphambili, azifumaneki kwisikhululo sikaloliwe, kwangoko 60 kwiintsuku ngaphambi komhla wokuhamba kwakho. Unoku-odola olu hlobo lwetikiti lololiwe kusuku olungaphambi kohambo. Ngaphezu, Itikiti leSaver Day Pass lisebenza ngokusemthethweni kwizikhephe, iibhasi, okanye uhambo lweetramu.
Isigcina-ntloko seSBB Amatikiti:
Le klasi yekitikiti ayinakuguquguquka njengeTikiti leSBB eliqhelekileyo, kodwa ngexabiso eliphantsi kunamanye amatikiti etreyini. Itikiti leSupersaver SBB linikezela 70% isaphulelo kwiitikiti eziqhelekileyo. Ngokuchasene netikiti likaloliwe eliqhelekileyo, Olu hlobo lwetikiti lubonelela ngexabiso eliphantsi kuhambo oluthile ukusuka ku-A ukuya ku-B. Intsingiselo, awunakukwazi ukuphuma nokuhla nakwesiphi na isikhululo, ngaphandle kwezikhululo ozibhukishe kwangaphambili.
Ikhadi lokuhamba leSuku lokuPasa likunika ukuguquguquka ngomhla wokuhamba. Ngamanye amazwi, ungahamba nanini na unqwenela, Ngomhla wokuhamba.
Ngaba kukho umrhumo weSBB?
Ngabemi baseKhaya kuphela abanokuthenga ikhadi lokuhamba leGA, Elisisiseko ikhadi elinye layo yonke into. Ikhadi lokuhamba le-GA lisemthethweni nge Zonke izithuthi zikawonkewonke eSwitzerland.
– Izinto zokubala zamatikiti eSBB.
– Kwinkonzo yabathengi yendawo ye-SBB 848 44 66 88
– Ukusuka kubasebenzi bakaloliwe be-SBB kunye neebhasi.
Ikhadi lokuhamba leFamilia GA
Abantwana kunye nabantu abadala abancinci kude kube seminyaka yobudala 16 kwaye abazali babo banokonwabela izaphulelo kwikhadi lokuhamba leFamilia GA. Eli khadi liyafumaneka ukuba ilungu elinye losapho elineli khadi lokuhamba le-SBB.
Bonke abaphathi beFamilia GA baonwabele amaxabiso ancitshiswe kakhulu kwelinye ikhadi lokuhamba le-GA. Ukwengeza, Usapho lunokuthatha isigqibo sokuba banqwenela ukuthenga iFamilia GA kwiklasi yoku-1 okanye yesi-2.
Isixhenxe25 Ikhadi lokuhamba
Xa 25 konke malunga nokonwaba, kwaye ngoku ndinamakhadi asixhenxe anesixhenxe, ungahamba ngokungasikelwanga mda ukusuka 7 pm. Intsingiselo, Eli khadi lokuhamba lisebenza phakathi 7 pm ngayo 5 am. ke, Ingaba isebenza kanjani? Ezi sixhenxe zilayishwe kwikhadi lakho lokuhamba laseSwitzerland kwaye ungayisebenzisa nakuphi na ukuma.
I-Basel ukuya kumaxabiso oLoliwe e-Interlaken
Geneva ukuya kumaxabiso oololiwe eZermatt
UBern kuZermatt amaXabiso oQeqesho
ILucerne ukuya kwiZermatt yamaXabiso oLoliwe
Kuthatha ixesha elingakanani ngaphambi kokumka kwe-SBB?
Ukufumana i-SBB yakho kwaye ulunge ngexesha, Uloliwe ucebisa ukuba ufike okungenani 1 iyure ngaphambi kokuba uloliwe wakho we-SBB ahambe. Thina kwaSave A Qeqesha okoko sahamba kakhulu koololiwe be-SBB, ndincoma ukufika 30 imizuzu ngaphambi kwexesha, ke awudingi ukungxama kwizikhululo zikaloliwe ezinkulu ukubamba uloliwe. Ukwengeza, iyure lixesha eloneleyo lokonwaba iivenkile kunye nezitendi zokutya kwaye ufumane ezo zinto uzifunayo Uhambo lukaloliwe ukuze lubhetyebeke kangangoko kunokwenzeka.
Zithini iishedyuli zoololiwe ze-SBB?
Ungafumanisa real-time kwiphepha lethu lasekhaya kwi Gcina A Isitimela. Chwetheza kwindawo yakho yangoku kunye nendawo oyifunayo, kwaye siya kukubonisa ulwazi oluhlaziyiweyo lweeshedyuli zoololiwe.
Zeziphi izikhululo zikaloliwe ezinikezelwa yi-SBB?
Kukho ngaphezulu 10 Izikhululo ezinikezelwa ziinkonzo zoololiwe ze-SBB.
Isikhululo seZurich se-SBB sisiZiko seZurich Central (Igama lendawo nguZurich HB). Esi sisikhululo sikaloliwe esikhulu kunazo zonke eSurich kwaye simi entliziyweni yeZurich, eduze Umlambo iLimmat.
IBern sisixeko esilikomkhulu laseSwitzerland kunye nesona sikhululo sikaloliwe sikufutshane kwiDyunivesithi yaseBern kwikota yeLanggasse.
EGeneva Kule mihla Oololiwe beSBB hamba kwaye ufike uvela eGeneva Central Station, embindini wesixeko.
Basel Isikhululo se-SBB sesona sikhululo sikhulu semida eYurophu. Oko kukuthi ukusuka eSwitzerland, ungaya eJamani, Fransi , Ostriya , kunye neNetherlands ngenkonzo yoololiwe ye-SBB. okubaluleke kakhulu, nazi 50 iivenkile kunye neeresityu kwisikhululo saseBasel, apho ungathenga khona kuyo yonke into oyifunayo kuhambo. Njengokuba, ungathenga amashwamshwam kunye nezikhumbuzo zomzuzu wokugqibela. Ukusuka kwisikhululo seBasel SBB, kunye nezikhululo eziphambili onokuhamba ngazo yiFrankfurt, EParis, kunye neSalzburg.
Ngaba iiBikes zivumelekile kwiBhodi Oololiwe beSBB?
Iibhayisikile zivunyelwe koololiwe be-SBB. Ungabathengela itikiti esitishini, kwaye ubhalise isithuthuthu njengemithwalo okanye uzise kuloliwe njengempahla yezandla.
Ngaba abantwana bahamba simahla koololiwe be-SBB?
Ewe kwezinye iimeko, Ukuhamba nabantwana abangaphantsi kweminyaka emithandathu ubudala bahamba simahla. Ukwengeza, abantwana ukusukela kwiminyaka emithandathu, ukuya kuthi ga kwabo 16 uhambo lokuzalwa ngesiqingatha sexabiso.
Ngaba zizilwanyana zasekhaya ezivunyelweyo koololiwe be-SBB?
Ewe, izinja ziyavunyelwa ukuba nje zihamba kwikreyiti yomkhweli okanye kwiveni yomthwalo.
Zithini iinkqubo zokubhoda ze-SBB?
Kuya kufuneka ufike kwisikhululo ubuncinci 1 Iyure ngaphambi kwexesha lakho lokuhamba, kwaye ubonise isazisi kumhloli wetikiti ukuze aqinisekise.
Uninzi lwe-SBB FAQ – Ndingasigcina isihlalo kwangaphambili kwi-SBB?
wena unako gcina kuloliwe a ndiyazie ngaphambili ukuya kuthi ga 5 abakhweli ngexabiso le- € 5 kwisihlalo ngasinye. kunjalo, Ukubhukisha kufuneka kube phantsi kwegama lomntu ohambahambayo.
Ngaba ikhona inkonzo ye-Wi-Fi ngaphakathi kwe-SBB?
Ewe. Unokonwaba free IWi-Fi inkonzo kuzo zonke izitimela ze-SBB nazo zonke iiklasi zokuhamba ukuya kuthi ga 60 imizuzu.
Ukuba ufundile ukuza kuthi ga ngoku, uyazi yonke into ekufuneka uyazi malunga noololiwe bakho be-SBB kwaye bakulungele ukuthenga itikiti lakho loololiwe le-SBB Gcina A Isitimela.
Ngaba uyafuna ukumisela eli phepha kwindawo yakho? Cofa apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-sbb%2F%3Flang%3Dxh - (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela), Okanye unokuxhuma ngqo kweli phepha.